Eyona 60 imidlalo yebhodi abadala | Ndinike ixesha lokuphumla
UIsake | 17/12/2021 17:48 | Ukuhlaziywa ukuba 20/12/2021 16:09 | ngokubanzi
Ukusukela oko kwabhengezwa ubhubhane wehlabathi, imidlalo yebhodi kubantu abadala intengiso yabo iye yanda. Isizathu sesokuba, phambi kwezithintelo kunye noloyiko lwabanye, yintoni isicwangciso esingcono nesikhuselekileyo kunokuhlala ekhaya nosapho okanye abahlobo bejikeleze itafile kwaye bachithe awona maxesha alungileyo okuhleka kunye nokhuphiswano lokudlala le midlalo imnandi kangaka.
Nangona kunjalo, zininzi kakhulu kangangokuba ngamanye amaxesha kunzima ukwazi ukukhetha. Kwesi sikhokelo unokuqonda ngcono yonke into enxulumene neyona midlalo ilungileyo yebhodi kubantu abadala, iintlobo, kunye neendlela ezahlukeneyo onokuthi uchithe awona maxesha angcono ekhaya ...
1 Eyona midlalo yebhodi ithengiswa kakhulu yabantu abadala
1.3 Ipati & Co. Extreme 3.0
2 Indlela yokukhetha umdlalo webhodi ongcono kubantu abadala?
2.1 Imidlalo yebhodi eyonwabisayo yabantu abadala
2.1.2 I-Glop Pint
2.1.3 Isizwe sama Scoundrels
2.1.4 Umdlalo uvaliwe
2.1.5 Umdlalo webhodi phakathi kwabahlobo
2.1.6 Ucima u-Crazy
2.2 Kuba uhlobo usapho Trivial
2.2.2 Incinci leyo ijingayo
2.2.4 Ngubani ofuna ukuba ngusozigidi?
2.2.5 Inombolo yokuvula
2.2.7 Dlala ngenkcubeko yegeek
2.3 Ukudlala nabahlobo
2.3.1 Itafile ye-4-in-1 yemidlalo emininzi
2.3.2 Ibhola ekhatywayo
2.3.3 Itafile yePing pong
2.3.4 Ixesha liphelile!
2.3.5 Isantya sehlathi
2.3.6 Ndinabo ababini
2.3.7 Iqela le-EXIN
2.3.8 Kwisikhwenene Hayi ewe okanye hayi Hayi iimfihlo
2.4.1 Izisele kunye neeDragons
2.4.2 Ulandelelwano lukaGoliyati
2.4.4 Isizwe samaTyala Masiqhubeke sisona
2.5 Imidlalo yebhodi yababini
2.5.2 4 emgceni
2.5.3 (Un) abantu obaziyo?
2.5.4 Uthando ngamazwi
2.5.6 Hasbro Txilela Fleet
2.5.7 isifo samathambo
2.6 Imidlalo yebhodi yeqhinga
2.6.3 Umngcipheko weHasbro
2.6.4 Isicwangciso soyilo
2.6.5 IMonopoly yeClassic
2.7 Imidlalo engcono kakhulu yentsebenziswano
2.7.3 Devir Isiqithi esiNgavumelekanga
2.8.1 Iphazili ye-2000
2.8.2 Inqanawa ye-Pirate iphazili ye-3D
2.8.5 UNO usapho
2.8.6 Inyawana ezingutic TAC
2.8.7 Ibhodi yechess, iitshekhi kunye ne-backgammon
2.8.8 Ibhodi yeParcheesi + OCA
2.8.9 Idekhi yamakhadi
2.9 Isizukulwana esitsha
2.9.1 Imidlalo yebhodi ye-Intanethi kunye nee -apps
2.9.2 Imidlalo yokwenyani eyandisiweyo
3 Imibuzo ebuzwa rhoqo
3.1 Yeyiphi imidlalo yebhodi yabantu abadala?
3.2 Kutheni uthenga olu hlobo lokuzonwabisa?
3.3 Ungazithenga phi?
Eyona midlalo yebhodi ithengiswa kakhulu yabantu abadala
Kukho inani elikhulu, best ibhodi imidlalo abadalaZombini iiklasikhi ezithe zathengiswa isizukulwana emva kwesinye, kunye nezona zanamhlanje. Nangona kunjalo, ungazivumela ukuba ukhokelwe luluhlu lwe Abathengisi abagqwesileyo ukusuka kwinyani. Bangabathengisi abaphezulu kwaye, ukuba bathengisa kakhulu ... kungenxa yokuba banayo into ekhethekileyo:
Ngaba uya kuba netheko okanye intlanganiso nosapho okanye abahlobo? Ngaba ufuna ukuhleka okuqinisekisiweyo? Emva koko lo mdlalo webhodi wabantu abadala yinto obuyikhangela. Yenzelwe abantu abangaphezu kweminyaka eyi-16. Unemizuzwana eyi-8 yokuqikelela ezona ngcinga zingaqhelekanga zosapho lwakho kunye nabahlobo. Amahlaya amnyama kunye namahlaya angcolileyo aqokelelwe kwiileta ze-400 kunye nemibuzo kunye neeleta ezikhethekileyo ze-80.
ISIZWE SINVERGUENZES ...
Omnye umdlalo webhodi ongcono kakhulu wabantu abadala. Inemingeni yazo zonke iintlobo, zonke zilayishwe ngobumnandi obuhle ukuze ukuhleka kukhululwe. Ngemibuzo engenangqondo nehlekisayo ngokupheleleyo. Igqibelele ukuzipha isipho okanye ukunika abantu obathandayo. Ewe kunjalo, yeyabantu abangaphezu kweminyaka eyi-18 ...
Ipati & Co. Extreme 3.0
Diset-Ipati & Co ...
Ukuba iphakathi kwabathengisi abagqwesileyo akumangalisi. Ungadlala ngokwamaqela, kunye neemvavanyo ezili-12 ezahlukeneyo kunye neendidi ezi-4. Ngovavanyo lokuzoba, imibuzo, ukulinganisa, ukwenza, njl. Enye yazo zonke kwenye engasoze yakudika nokuba udlala kangakanani, kwaye oko kuya kwenza wonke umntu abe nexesha elimnandi lokudlala.
COCORROTO- Umdlalo we ...
Umdlalo wekhadi onesibindi onamakhadi angaphezu kwama-600 ukuze ube neeyure ezingama-234 zokuhleka okuqinisekisiweyo. Umdlalo wabantu abadala apho iimeko ezivuselela inkanuko, ubuganga, uburharha abamnyama, kunye ne-0% yeenqobo zokuziphatha zixutywe. Nantoni na iya kuhleka ingayeki. Kule nto, umdlali ngamnye unamakhadi amhlophe ali-11 (iimpendulo), kwaye umdlali ongaqhelekanga ufunda ikhadi eliluhlaza kunye nesithuba esingenanto. Ngale ndlela, umdlali ngamnye ukhetha elona khadi lihlekisayo analo ukugqibezela isivakalisi.
Indlela yokukhetha umdlalo webhodi ongcono kubantu abadala?
Ngexesha le khetha owona mdlalo webhodi ungcono kubantu abadala Amathandabuzo anokuthi avele, kwaye ayinguye wonke umntu othanda imixholo efanayo kunye neefomathi zomdlalo. Kukho ngokwamaqela ahlukeneyo, ukusuka kwamanye athile ukuya kumalungu osapho, amanye afaneleka ngakumbi kumaqela abahlobo ngenxa yomxholo wabo okanye umxholo, kunye nokunye okuthe ngqo kuhlobo lomdlalo ekuthethwa ngawo. Ke ngoko, kuya kufuneka wazi awona mahlelo ahlukeneyo afunwayo:
Imidlalo yebhodi eyonwabisayo yabantu abadala
Kukho imidlalo yebhodi yabantu abadala egqamayo ngakumbi ekuhlekeni kwabo bakwenzayo, ezo zimnandi apho nabani na aphele ehleka okucocekileyo. Ezo zikubeka kwiimeko ezihlekisayo, okanye zikwenza ukhuphe umoya wakho ohlekisayo. Ezo zikwenza uchithe ubusuku obungalibalekiyo kunye nabantu obathandayo abaya kuhlala bekwinkumbulo. Eyona nto ihlekisayo kuzo zonke zezi:
Xa udibana nayo, iya kuba yenye yale midlalo yebhodi yokulingisa eya kuba phakathi kwezinto ozithandayo. Yenzelwe usapho okanye abahlobo, ngokuhleka okuqinisekisiweyo ngokupheleleyo kunye nokuchukumisa isicwangciso, amanqanaba ahlukeneyo, iindidi, kunye nenjongo yokufumana uhlobo ngalunye lwekhadi ukuba liphumelele.
IGlop Pinta-Imidlalo ye...
Inokuba yinto engenye elungileyo kuneyangaphambili, okanye umphelelisi ogqibeleleyo, kuba yenzelwe loo maxesha nosapho okanye nabahlobo xa ufuna ukonwatyiswa kunye nolonwabo. Kodwa, ngokungafaniyo neyokuqala, imalunga nokupeyinta kunye nokuqikelela.
Isizwe sama Scoundrels
ISIZWE SINVERGUENZAS -...
Umdlalo omnandi owenziwe eSpain, osekwe kumakhadi kwaye ulungele ukuhleka nabahlobo. Ngokuchukumisa i-hooligan, kuya kufuneka umangalele kwaye baya kukumangalela, ngaphezu kokuzithoba kwiimvavanyo ezingenangqondo kunye nokuthatha inxaxheba kwimingeni yentlalo ongazange uyicinge. Umdlalo owaziyo ukuba uqala njani, kodwa awazi ukuba uphela njani ...
Thenga Tribe of Scoundrels
Umdlalo oyonwabisayo wayo yonke iminyaka kunye ne-120 yeeduel ezizodwa ukwenza ubuso ngobuso kwaye ubonise ingqondo yakho, amandla omzimba, isibindi, isakhono, okanye ithamsanqa. Ziyakhawuleza kwaye ziyonwabisa iiduels, kwaye apho abanye abadlali baya kusebenza njengabagwebi ukumisela ukuba ngubani ophumeleleyo.
Umdlalo webhodi phakathi kwabahlobo
😈 Bahlobo🤣 -Umdlalo ...
Ilungele iindibano zabahlobo, i-bachelorette okanye amaqela e-bachelorette, njl. Ukuhleka kunye nokungcangcazela okuhle enkosi kwimibuzo ezinikeleyo oya kuthi uphantsi kwayo kwaye ungeniswe. Uya kuphulukana nalo lonke ihlazo kunye nemiceli mngeni kunye nemibuzo ephakathi kwamakhadi ...
Thenga umdlalo weBhodi phakathi kwabahlobo
Enye indlela elungileyo kwiPati, eyenzelwe usapho lonke kunye nabahlobo, ukusuka kwi-8 yeminyaka ubudala. Umdlalo oyonwabisa kakhulu odibanisa iimvavanyo zazo zonke iintlobo, ezinjengokumamela, ukuzoba, ukulinganisa, izityholo ezihlekisayo, kunye nempambano yokugqibela enkulu. Abokuqala ukufumana zonke ii-loci ezi-5 baya kuphumelela isithsaba sikaKumkani weZidenge ...
Ayidingi zintshayelelo, yinto yakudala. Kuwo wonke umntu, ngenjongo yokunika imikhondo ngaphandle kokusebenzisa amagama awalelweyo. Ngomxholo ohlaziyiweyo kunye namagama ukuya kuthi ga kwi-1000 kunye neendlela ezi-5 zokudlala ezahlukeneyo. Ukuba inkwenkwe yase-Altar kunye no-Xavier Deltell babenobunzima kwisitulo se-cramps kwinkqubo ye-Me slips, ngoku unokuvelana nabo ...
Hasbro - Jenga Hlaziya ...
I-Mega Hi-Tower kwi-Bag -...
Enye iklasikhi phakathi kweeklasikhi, elula, kulula ukuyidlala, kubo bonke abaphulaphuli, kunye nokuzonwabisa. Yinqaba eyakhiwe ngeebhloko zokhuni ekuya kufuneka nitshintshisane ngokuzama ukuba ungadiliki. Akukhona nje ngokususa isiqwenga sakho, kodwa malunga nokuzama ukwenza ulwakhiwo lungazinzi kangangoko ukuze umchasi omchukumisayo kwithuba elilandelayo kube nzima ngakumbi.
Thenga iJenga Thenga iJenga enkulu
Kuba uhlobo usapho Trivial
Ukuba uyathanda imidlalo yebhodi yosapho uhlobo Trivial, kunye nemibuzo kunye nalapho ukubonisa izipho zobulumko kunye nenkcubeko zisisiseko, ngoko kufuneka ujonge kolunye ukhetho. Apha uya kubona amanqaku anenjongo yokuvuza lowo wazi kakhulu:
Imidlalo yeHasbro encinci ...
Ewe, phakathi kwemidlalo ye-trivia, i-Trivial ngokwayo ayinakungabikho. Umdlalo wenkcubeko jikelele we-trivia oneendidi ezahlukeneyo apho uya kuzama ukuphendula ngokufanelekileyo yonke imibuzo kwaye ufumane zonke izilayi zetshizi phambi kwakhe nabani na.
Thenga i-Trivial Pursuit
Incinci leyo ijingayo
Ishumi elinanye lokunyanzeliswa kwe-LQSA encinci ...
Ukuba ungumntu othanda iLa que se avecina, ke unethamsanqa, kuba kukho imidlalo yebhodi efana neTrivial enemixholo emininzi (Harry Potter, Star Wars, Dragon Ball, Lord of the Rings, The Big Bang Theory. ...), phakathi kwabo kwakhona uthotho lweSpanish LQSA. Ngaba ucinga ukuba uyazi kakuhle abalinganiswa bayo kunye nazo zonke iimfihlo zoluhlu? Zivavanye...
Thenga i-LQSA encinci
UGoliyati-Impama, Umdlalo we...
Omnye umdlalo we-trivia wentsapho yonke, ukusuka kwiminyaka eyi-8. Ibhodi, amakhadi angama-50 anemibuzo engama-500, kunye nobulumko bakho bokuphendula ngokuchanekileyo kwaye ufumane amanqaku. Leyo yi-dynamics, kodwa lumka ... imibuzo igcwele imigibe, kwaye ngamanye amaxesha ubukrelekrele bungcono kunesantya.
Ngubani ofuna ukuba ngusozigidi?
Abantu abaneminyaka eli-12 ubudala banokudlala, kunye nabadlali aba-2 okanye ngaphezulu. Lo mdlalo webhodi wabantu abadala usekwe kwimibuzo kamabonakude edumileyo enegama elifanayo. Kuya kufuneka uphendule imibuzo, kwaye uya kuba nothotho lwamakhadi asendle xa ukhetho luba nzima. Iimpendulo ezininzi ezikhethiweyo zinikezelwa kuwe, kwaye kuya kufuneka ukhethe echanekileyo, ukwandisa inqanaba lobunzima ngexesha ngalinye.
Thenga Ngubani ofuna ukuba ngusozigidi?
Famogames- Igama lokugqithisa...
Umdlalo webhodi yosapho lonke olusekelwe kwimibuzo kamabonakude. Kuya kufuneka uvavanye ulwazi lwakho kwiimvavanyo ezi-6 ezahlukeneyo, kunye nemibuzo engaphezu kwe-10.000 kunye ne-rosco yokugqibela yokuzama ukuqikelela amagama amaninzi ngaphambi kokuba ixesha liphele.
Umdlalo weHasbro -...
Omnye weyona midlalo ihlekisayo phaya, kwaye ilula, kodwa iya kuvavanya ukucinga kwakho, ubuchule bokuyila kunye nesigama. Kwi-Scattergories ungadlala ukusuka kubadlali aba-2 ukuya kwaba-6, ukusuka kwi-13 leminyaka ubudala, kwaye apho kuya kufuneka ufumane amagama akwicandelo kwaye aqale ngonobumba othile.
Dlala ngenkcubeko yegeek
Dlala ngenkcubeko yegeek ...
Isihloko sayo yonke iminyaka kunye nabalandeli behlabathi letekhnoloji, i-Intanethi, imidlalo yevidiyo, intsomi yesayensi kunye namaqhawe abalaseleyo. Oko kukuthi, iigeeks. Ngoko unokuvavanya ulwazi lwakho okanye olo lwabahlobo bakho kuzo zonke ezi zihloko.
Ukudlala njengentsapho akufani nokwenza nabahlobo, apho iatmosfera yahluke kancinane. Ziyonwabisa kakhulu, zinomxholo onokuthi ubandakanye ukukubonisa indlela odla ngokuzibonakalisa ngayo kubahlobo kuphela, okanye ezingafanelekanga kusapho lonke. Ngezo zihlandlo nabahlobo bakho abasenyongweni, ezona zihloko zibalaseleyo onokuzifumana zezi:
Itafile ye-4-in-1 yemidlalo emininzi
Itafile yeLeomark Multigame ...
Le theyibhile yemidlalo emininzi ilungile yokudlala nabahlobo. Inemidlalo emi-4 kwitafile enye, efana neebhiliyoni, ifoosball, iping pong, kunye nehoki. Ngezinto ezisemgangathweni ezifana nemithi, isakhiwo esomeleleyo, imilinganiselo yebhodi ye-120 × 61 cm kunye ne-82 cm ubude. Ihlanganiswe ngokukhawuleza kwaye kulula kwaye inomgangatho waseYurophu kunye nezatifikethi zokhuseleko.
Thenga itafile yemidlalo emininzi
Ibhola ekhatywayo yakwaMaxstore...
Ibhola ekhatywayo esemgangathweni, kwi-MDF yokhuni enobunzima be-15 mm. Imilinganiselo yi-121x101x79 cm. Ngemilenze ezinzileyo kunye nokuphakama-adjustable. Ibandakanya iinkcukacha ezinje ngekhawunta yenjongo, enemivalo yentsimbi kunye neziphatho zerabha ezingatyibilikiyo, imifanekiso epeyintiweyo, kunye nezibambi zeekomityi ezi-2. Iibhola ezimbini kunye nemiyalelo yokunyuka ifakiwe.
Itafile yePing pong
Dione S500o-Itheyibhile ...
Ukusonga itafile yeping pong ukungathathi indawo, ilungele ngaphakathi nangaphandle, njengoko ixhathisa izinto. Ngebhodi eyomeleleyo enobuso be-274 × 152.5 × 76 cm. Ibandakanya i-8 ivili ukuze ikwazi ukuyijika okanye ukuyihambisa ngokulula, kunye ne-brake ukuyithintela ukuba ihambe ngexesha lomdlalo. Iibhola zomdlalo kunye neepaddles azifakwanga, kodwa ungazithenga ngokwahlukeneyo:
Thenga itafile yeping pong
Thenga iseti yemihlakulo kunye neebhola
Ukuveliswa kweRepos- Ixesha ...
Umdlalo ogqibeleleyo wabahlobo apho kuya kufuneka uqashele umlinganiswa. Banokuba ngabantu bokwenyani okanye abayintsomi abadumileyo, kwaye yonke into inombulelo kwiinkcazo ezinikwe umlinganiswa ngamnye ngaphandle kokubiza amagama. Oko kumjikelo wokuqala, kumjikelo olandelayo izinga liyenyuka kwaye kufuneka babethe igama nje elinye. Kumjikelo wesithathu, ukulinganisa kuphela okusebenzayo.
Thenga Ixesha liphelile!
Umdlalo wekhadi onemidlalo emincinci eyahlukeneyo. Ifanelekile ukusuka kwiminyaka eyi-7. Kuya kufuneka ufumane amakhadi anesimboli efanayo neyakho kwaye ubambe itotem. Ngeesimboli ezingaphezu kwama-50 kunye namakhadi angama-55 ahlukeneyo. Isantya, ukujonga kunye ne-reflexes kuya kuba ngundoqo.
Thenga isantya seJungle
Umdlalo webhodi omnandi apho udlala khona amakhadi kwaye kufuneka usebenzisane. Ulindelo, uvelwano kunye nabahlobo bakho, kunye nesantya siya kukukhokelela kuloyiso. Umdlali ngamnye makazame ukuthelekelela iimpendulo ezinikwe ngabanye abadlali ngelixa abanye bezama ukuthelekelela ezabo.
I-EXIN Fiesta-Umdlalo we...
Yibhokisi ene-3 kwi-1. Uya kufumana umdlalo wokubulala, apho abadlali abamsulwa kufuneka bafumanise ukuba ngubani umbulali ofihlakeleyo, omnye umdlalo weqela, apho kufuneka uqikelele amagama amaninzi ngokulandela imigaqo yomjikelo ngamnye (inkcazo , ukulinganisa, ukuzoba, isandi), kunye nomdlalo wesantya, ozama ukuphendula amakhadi amaninzi kangangoko kunokwenzeka kwi-1 min kunye neqela lakho.
Thenga iEXIN Fiesta
Kwisikhwenene Hayi ewe okanye hayi Hayi iimfihlo
Imidlalo yeAl Loro-Ni Si Ni ...
Umdlalo wetafile wabantu abadala ulungele amaqela kunye nabahlobo. Iqukethe ukuphendula imibuzo eyi-10 elungiselelwe kunye neneziqholo ngaphandle kokuthi Ewe okanye Hayi. Abantu aba-2 okanye abaninzi njengoko ufuna banokudlala. Indlela yokunxulumana nabanye abantu osandul' ukudibana nabo okanye kwiihambo zokusela iziselo.
Thenga Hayi ewe okanye hayi
Kukwakho nezinye imidlalo yebhodi yabaselula, enomoya omtsha nowangoku ngakumbi ojoliswe kwizizukulwana ezitsha. Iimveliso ezine-slang yolutsha, ezinemixholo ekhethekileyo kweli qela lobudala, okanye oko kuthetha ukuba ulwazi lwetekhnoloji entsha, iintsingiselo, njl. Eminye imizekelo yayo yile:
Izisele kunye neeDragons
Imigodi kunye nebhokisi yeeDragons ...
Ngomnye wemidlalo edumileyo. Iidragons kunye nemigodi ziye zaduma ngakumbi emva kweThe Big Bang Theory series, ekubeni abalinganiswa bayo babedla ngokudlala. Enye yezona midlalo zibalaseleyo zebhodi ukuba uthanda ukucinga kunye nefantasy. Umdlalo wokubalisa amabali apho abadlali kufuneka bazintywilisele kuzo zonke iintlobo ze-epic adventures, ukusuka ekuphononongeni iimazes, ukuphanga ubutyebi, ukulwa nezilo zamandulo, njl.
Thenga ibhokisi yokuqalisa iD&D
Thenga iD&D Essential Kit
Ibhodi yomdlalo kaGoliyati, ...
Umdlalo odibanisa eminye imidlalo embalwa ibe mnye. Luhlobo lwesicwangciso, kwaye kufuneka ufunde ukubhloka abachasi bakho kwaye ususe iziqwenga zabo ebhodini ngaphambi kokuba bayenze nawe. Ungadlala uwedwa okanye ngomfelandawonye. Uya kubona ukuba kubonakala ngathi zithathu emgceni, nangona kule nto kufuneka ubeke iitshiphusi ezi-5 zombala ofanayo ngokuthe tye, ngokuthe nkqo okanye ngokwediagonally, kodwa kuxhomekeke kumakhadi akuchukumisileyo esandleni sakho, ngokungathi yipoker.
Isihloko esonwabisayo, esishukumisayo kunye nolutsha apho uya kuba nesigulane kwiziko leengqondo ezikholelwa into okanye isilwanyana, kunye nemidlalo ye-90-yesibini apho abadlali bangakwazi ukuthetha, kodwa ngokubonakalisa kufuneka benze abanye bazi ukuba yintoni. Bangakwazi ukudlala i-2 okanye ngaphezulu, kwaye ifanelekile iminyaka engaphezu kwe-8. Kodwa qaphela, ekubeni "ugqirha" ungavumeli ugqirha ukuba abone into oyiyo, ekubeni nguye yedwa weqela elingafaniyo ne "chota".
Thenga ndiyi banana
Isizwe samaTyala Masiqhubeke sisona
Isizwe sama Scoundrels ...
Esinye isihloko kolu luhlu lwemidlalo yebhodi yaseSpain. Enye yaloo midlalo i-hooligans kunye nokuhleka okuqinisekisiweyo. Qokelela oogxa bakho, hlenga amakhadi, kwaye uqale ngelokuqala. Kukho iintlobo ezi-4 zamakhadi amatsha, isityholo, umngeni ekuhlaleni, WTF! Imibuzo kunye namakhadi angenanto ukuze uze nento oyifunayo.
Thenga Masiqhubeke sisona
Imidlalo yebhodi yababini
Los imidlalo yebhodi ezimbini Ziyiklasiki, kwaye zininzi zazo. Ukudlala njengesibini se-de facto, okanye naluphi na uhlobo lwesibini. Ifanelekile xa abantu abaninzi bengakwazi ukuhlanganisana kwaye akunakwenzeka ukusebenzisa ezinye iibhodi ezihlala zifuna amaqela amakhulu okanye amaqela. Eyona midlalo yebhodi ingcono yabantu abadala yolu hlobo yile:
Ukuba netafile echibini endlwini ngaphandle kwendawo eninzi ayinakwenzeka njalo, kodwa ngale tafile yokutya ejika ibe yibhiliyoni. Ukusebenza kunye nokuzonwabisa kuhlangene kule tafile eguquguqukayo yokulinganisa i-206.5 x 116.5 x 80 cm ubude, ububanzi kunye nobude. Ibandakanya zonke izixhobo zokudlala kwaye inokukhethwa nge-tapestry ngemibala eyahlukeneyo.
Thenga i-pool table
IFalomir-Indawo yesi-4 yoMdlalo ...
Iichips zemibala emibini, abathathi-nxaxheba ababini. Umbono kukuwafaka kwiqela lenjongo ukuzama ukwenza imiqolo yesi-4 kumgca wombala wakho ofanayo. Umchasi kufuneka enze okufanayo, ngelixa ekuthintela ukuze ungayifumani ngaphambili.
Thenga ezi-4 kwi-Intanethi
(Un) abantu obaziyo?
(Un) abantu obaziyo? –...
Ayingomdlalo webhodi kuphela wabantu abadala aba-2, kodwa ikhethekileyo kwizibini. Kuyo uya kukwazi ukuvavanya oko ukwaziyo malunga neqabane lakho, kunye nemibuzo malunga nobomi bemihla ngemihla, ubuntu, ubuhlobo obusondeleyo, izinto ozithandayo, njl. Khetha ileta enombuzo, votela impendulo efanele wena, kwaye omnye umntu aphendule ukuze abone ukuba iyahambelana na ...
Thenga (Un) abantu obaqhelileyo?
Omnye umdlalo webhodi eyenzelwe izibini. Ngayo uya kukwazi ukomeleza amaqhina kwaye akuncede ukuba usazi ngakumbi isibini, nakwiimfihlo ezinzulu kakhulu. Kulula ukudlala, kukho amakhadi ayi-100 anemibuzo eyenzelwe ukukhokelela kwincoko malunga nexesha elidlulileyo, ikamva, iimvakalelo, imali, iminqweno, ukusondelana, njl.
Ngumdlalo wokusebenzisana, ukufunda kunye nokonwaba. Ikuvumela ukuba udlale ukuba ngoyena ukhawulezayo kwaye ulumke kakhulu ukufumana imikhondo efihlakeleyo kunye nengaqondakaliyo kwaye ungene kwizihlangu zentlola eyimfihlo ukuze ufumane okufihliweyo kwaye ngaloo ndlela uphumelele umdlalo ngaphambi kokuba umchasi wakho enze.
Hasbro Txilela Fleet
Umdlalo weHasbro- Txina ...
Umdlalo waselwandle apho udlala khona kunye nolungelelwaniso lokuzama ukutshonisa iinqanawa zomchasi wakho. Baza kubekwa kwizikhundla azikhethileyo, kwaye awukwazi ukuzibona kwaye akakwazi ukubona ezakho. Idlalwa imfama, kwaye izama ukufumana apho bakhoyo ukuyisusa. Ngaphandle kwamathandabuzo enye yeeklasikhi ezimbini ...
Thenga iSink Fleet
Umdlalo we-ARTAGIA Ulonwabo kunye ...
Umdlalo okhethekileyo omnandi wezibini ezitshatileyo apho unokuphucula ukuzithemba, unesibindi ngeencoko ezihlekisayo, ukudlala ngothando, njl. Khetha ikhadi, uphendule umbuzo, okanye wenze ucelomngeni lothando. Uyafuna?
Abalandeli beQhinga abafuna ukulahla iWarcraft, i-Age of Empires, i-Imperium, njl., kwaye batshintshele kwimidlalo ye-tabletop baya kuvuya ngezihloko ezinje:
I-Devir-Catan, umdlalo we ...
Ngumdlalo weqhinga ophumelele imbasa, kwaye unabadlali abangaphezu kwezigidi ezi-2 esele. Kuthatha ingqwalasela kunye nokuba liqhinga elilungileyo ukuphumelela. Icetyiselwe iminyaka eyi-10 ukuya phezulu kunye nabadlali aba-3 okanye aba-4. Kuyo uya kuba ngomnye wabahlali bokuqala kwisiqithi saseCatan, kwaye iidolophu zokuqala kunye neziseko zophuhliso ziya kuqala ukubonakala. Kancinci kancinci uya kuvela, iidolophu ziguqulwa zibe zizixeko, iindlela zothutho kunye norhwebo ziyaphuculwa, iindlela zokuxhaphaza izixhobo, njl.
Enye yezona midlalo zibalaseleyo zeqhinga kwaye yenye yezona ziphambili. Ibandakanya ibhodi enokwandiswa okunokwenzeka ukongeza amathuba amaninzi kunye nomxholo. Ilungele abadlali aba-2 ukuya kwaba-5, kwaye ifanelekile iminyaka eyi-7 ukuya phezulu. Bangaphezu kwezigidi ezili-10 abadlali ababanjiswe kulo mdlalo apho kuya kufuneka wandise indawo yakho, ulwe, kwaye woyise izinto ezintsha.
Enye yee-greats zesicwangciso apho ukoyiswa kobukumkani bakho kukoyisa. Ngamanani angama-300, amakhadi emishini, anemishini eyi-12 eyimfihlo, kunye nebhodi yokubeka imikhosi yakho kwaye ulwe kumadabi amangalisayo. Umdlalo ogcwele umanyano, uhlaselo olothusayo, kunye nokungcatshwa.
Ubudala be-8 ukuya phezulu kunye nabadlali aba-2, i-Stratego yenye yezona zinto zibalaseleyo zebhodi yemidlalo yebhodi yabantu abadala. Ibhodi yakudala apho unokuhlasela kwaye uzikhusele ukuze uzame ukoyisa iflegi yotshaba, oko kukuthi, uhlobo lweCTF. Ngamaqhekeza angama-40 kumkhosi wemigangatho eyahlukeneyo oya kukwazi ukuvavanya ukucinga kwakho okusengqiqweni kunye nobuchule.
I-Monopoly-Classic, endala ...
Kukho iinguqulelo ezininzi zeMonopoly, kodwa enye yezona ziphumelele kakhulu iseyiklasiki. Nangona ingengomdlalo weqhinga lokusebenzisa, ifuna ubulumko kwaye yazi indlela yokulawula ukwazi ukuthenga nokuthengisa ukuze ufumane ubukhosi bobutyebi.
Imidlalo engcono kakhulu yentsebenziswano
Ngokuphathelele imidlalo yebhodi yentsebenziswanoUkudlala ngeemanyano, ezona zihloko zibalaseleyo onokuthi uzithenge sele:
Umdlalo webhodi kuyo yonke iminyaka ukusuka kwi-8 yeminyaka ubudala. Ngumdlalo wentsebenziswano apho kufuneka uzame ukusombulula imfihlakalo, kwaye bonke abadlali baya kuphumelela okanye baphulukane kunye. Injongo kukufumanisa ukuba yintoni na elele emva kokubhubha komoya wendlu enkulu kwaye wenze umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo. Umdlali omnye uthatha indima yesiporho, kwaye abanye abadlali badlala kunye nabadlali abaza kufumana uthotho lwezalathisi ezikhomba kwimfihlo ...
Lo mdlalo uthatha wena ukuya kuFebruwari 24, 1895, eLondon. Kuqhushumba ibhombu ePalamente kwaye uSherlock Holmes, ekunye nomncedisi wakhe, baza kubandakanyeka ukuze bafunde ubunyani ngeli tyala.
Devir Isiqithi esiNgavumelekanga
Umdlalo wentsebenziswano wosapho ophumelele imbasa. Kuyo uzintywilisela eluswini lwabahambi ekufuneka babuyise ubuncwane besiqithi esingaqondakaliyo. Ingadlalwa ukusuka kwiminyaka eyi-10. Hlanganisa amakhadi kunye namanani ebhodi ukuze uzame ukuphepha iingozi kwaye ufumane ubutyebi.
Lo mdlalo wentsebenziswano ulungele abadlali aba-2 ukuya kwaba-4, abaneminyaka eli-14 ubudala okanye ngaphezulu, kwaye kufuneka uzame ukusindisa uluntu kubhubhane. Izifo kunye nezitshabalalisi eziye zasasazeka zibulala abantu abaninzi, kwaye kufuneka ufumanise unyango. Ukwenza oku, baya kujikeleza umhlaba bekhangela izixhobo eziyimfuneko zokudibanisa unyango ...
Kwakhona i abadala banokuchitha ixesha elimnandi bedlala inkitha yemidlalo yebhodi, ngakumbi iminyaka "ePhezulu". Abanye sele beyiklasiki, kwaye baqhubeka bevusa umdla kweli qela lobudala, abanye bancinci, ubuncinci kwilizwe lethu, kuba bengeniswe kwezinye iindawo emhlabeni. Izihloko ekufuneka ziqwalaselwe ezingenakusilela zezi:
I-Educa - Iimpawu ze ...
Iphazili yabantu abadala, enamaqhekeza angama-2000, kunye nomfanekiso omhle weesimboli zaseYurophu. Iphazili, xa sele idityanisiwe, inomlinganiselo we-96 × 68 cm. Iichips zayo zikumgangatho ophezulu kwaye zifanelekile, ngaphezu kokuba zenziwe ngezinto ezihambelana nokusingqongileyo. Ilungele ukudlala nabantwana abaneminyaka eyi-12, abadala nangaphezulu.
Thenga i-Puzzle kubantu abadala
Inqanawa ye-Pirate iphazili ye-3D
Iphazili emnandi ye-3D ukwenza inqanawa entle yamapirate. Yenziwe ngegwebu le-EPS elixhathisayo, elinamaqhekeza angama-340 ukwakha i-replica ye-Queen Anne's Revenge kwisikali, kunye nemilinganiselo ye-68x25x64 cm. Yakuba idityanisiwe, inenkqubo yokukhanyisa ye-LED enezibane ze-15 ezisebenza ngeebhetri ze-2 AA. Ifanelekile iminyaka eyi-14 ukuya phezulu.
Thenga iphazili ye-3D
I-classics phakathi kweklasikhi kunye nentsapho yonke, nangona ngokukodwa kunye nabakhulileyo engqondweni. Ibandakanya igubu le-bass elizenzekelayo, iibhola ezinamanani, kunye nekiti yamakhadi yokudlala. Nabani na ofumana umgca kunye nebhingo kuqala, uyaphumelela.
Amakhadi anendibaniselwano yamanani ekufuneka uwaxube, uwasasaze phakathi kwabathathi-nxaxheba, kwaye ngokuthe ngcembe uthelekise amanani. Lowo ubeka kuqala zonke iitshiphusi zakhe uya kuphumelela.
Imidlalo yeMattel UNO Yeyoqobo ...
Umdlalo wamakhadi oqhelekileyo nowesintu ovumela abadlali aba-2 ukuba badlale ngabanye okanye ngokwamaqela. Injongo kukuba ngowokuqala ukuphelelwa amakhadi. Kwaye xa unekhadi elinye kuphela eliseleyo, ungalibali ukukhwaza UNO!
Lewpox Tic Tac-Umdlalo we ...
Umdlalo oqhelekileyo we-tic-tac-toe, ukuzama ukubeka iimilo ezi-3 ezilinganayo emgceni, ngokuthe tye, ngokuthe nkqo okanye ngokwediagonally. Kwaye zama ukuvimba umchasi wakho ukuze angayifumani ngaphambili.
Thenga ezi-3 zilandelelana
Ibhodi yechess, iitshekhi kunye ne-backgammon
A 3-in-1 ibhodi ukudlala le midlalo mithathu classic ukuba akukho ntshayelelo. Nangona inokuba yinto efanelekileyo kubantu abadala, yimidlalo engenabudala, ngoko ke abantwana banokudlala.
Ibhodi yeParcheesi + OCA
I-Fournier Parchis kunye neGoose ...
Umdlalo we-OCA kunye neParcheesi yenye yeyona midlalo idumileyo ngalo lonke ixesha. Ngale bhodi ibuyiselwa umva unokuba nayo yomibini imidlalo yolonwabo losapho.
I-Fournier F20991-iDekhi ...
I-Fournier- Nº 505 Idekhi ...
Ewe, phakathi kweeklasikhi awukwazi ukuphosa imidlalo yetafile yekhadi. Ngomgangatho weSpanish okanye ngedekhi yesiFrentshi, njengoko ukhetha. Uya kuba nakho ukudlala iindidi ezininzi zemidlalo, kuba ngedesika enye kukho ezininzi (Uno, Pócker, Chinchón, Cinquillo, Mus, Solitaire, Blackjack, 7 kunye nesiqingatha, Briscola, Burro,…).
Thenga umgangatho weSpanish Thenga indawo yepoker
Ngokuqinisekileyo, olu lunye udidi alukwazanga ukungabikho, olusandul 'ukuvela ngenxa yokuqhubela phambili kobuchwepheshe obutsha. Kwaye kukuba i-computing, i-Intanethi, kunye nenyani yenyani, inyani eyandisiweyo okanye itekhnoloji yenyani edibeneyo nayo itshintshe indlela edlalwa ngayo imidlalo yebhodi. A isizukulwana esitsha semidlalo yebhodi kuba abantu abadala sele befikile, kwaye kufuneka wazi ezi projekthi umdla:
Imidlalo yebhodi ye-Intanethi kunye nee -apps
Kukho imidlalo yebhodi eliqela ekwi-intanethi onokuyidlala nosapho lwakho okanye abahlobo ukude, kunye nezinye ii-apps eziphathwayo ezikuvumela ukuba udlale iiklasikhi kwimowudi yabadlali abaninzi okanye ngokuchasene nomatshini. Unokukhangela uGoogle Play kunye neeVenkile zeApp Store.
Amanye amaphepha ewebhu ane iijusi zetafile zasimahla Zizo:
Umdlalo weMidlalo yeBhodi
Imidlalo yokwenyani eyandisiweyo
Ngaba unokucinga ngomdlalo webhodi apho unokuphinda wenze inkitha yemidlalo eyahlukeneyo, kwaye apho unokubona khona ulwakhiwo kunye nezinto ezikwimigangatho emithathu, nalapho iithayile zingezizo iithayile, kodwa ziphile kwaye zibe ngamagorha, izilo, izilwanyana, njl. .? Ewe, yeka ukucinga, sele ilapha enkosi kwiiglasi zokwenyani ezandisiweyo kunye ibizwa ngokuba yiTilt Five.
Ezinye ze amathandabuzo aqhelekileyo kunye nemibuzo edla ngokubuzwa malunga nemidlalo yebhodi yabantu abadala yile ilandelayo:
Yeyiphi imidlalo yebhodi yabantu abadala?
Le yimidlalo yebhodi ethanda ukuba nomxholo ongabafanelanga abantwana, nangona ingeyiyo yonke. Kwaye akufuneki ngenxa yokuba banomxholo ofanelekileyo kubantu abadala, kodwa ngenxa yokuba benzelwe abantu abadala, ngoko kusenokwenzeka ukuba abancinci endlwini abazi ukuba badlale njani okanye badikwe.
Kutheni uthenga olu hlobo lokuzonwabisa?
Kwelinye icala, nanini na xa umdlalo udlalwa nosapho okanye nabahlobo, kuchithwa ixesha elimnandi, kwaye ukuhleka kuqinisekisiwe. Kwakhona, ngoku ngemeko yobhubhane inokuba sisicwangciso esihle nesikhuselekileyo sokuxhoma. Kwelinye icala, bakwakunceda ukuba unxibelelane ngakumbi kwaye umke kwiscreen sePC okanye kwikhonsoli yomdlalo, edla ngokuba yimidlalo ekhuthaza ukuba umntu abe yedwa kwaye azimele yedwa. Ngokuchaseneyo nemidlalo yebhodi yakudala, ekufutshane. Unokuyithatha njengesipho esikhulu seKrisimesi, okanye nawuphi na omnye umhla.
Kukho iivenkile ezininzi ezikhethekileyo zokuthenga imidlalo yebhodi, kunye neevenkile zokudlala ezikwabandakanya olu hlobo lwemidlalo yabantu abadala. Nangona kunjalo, olona khetho lubalaseleyo kukuthenga kwi-intanethi kumaqonga anje ngeAmazon, kuba unenani elikhulu lemidlalo ekunokwenzeka ukuba ungayifumani kuzo zonke iivenkile. Ukongeza, kukho iintlobo ngeentlobo zamaxabiso kunye nentengiso ngamaxesha athile onokuthi uthathe ithuba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » ngokubanzi » Imidlalo yebhodi engcono kakhulu yabantu abadala